အပြစ်ပြောရက်စရာမရှိအောင် ချောမောတဲ့ အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့ သူကတော့ ရုရှားသူ YouTuber လေး Dasha Taran ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ်က ၁၉နှစ်သာရှိသေးပေမဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားကြောင့် Instagram မှာfollower ၁သန်းခွဲကျော်ရှိပြီး အောင်မြင်လာတဲ့ ကြယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ” The Most Beautiful Faces of 2018 ” စာရင်းမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ အလှပဂေးတွေထဲက တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကိုရီးယားအေဂျင်စီဖြစ်တဲ့ Rainmakers နဲ့အတူ ကြော်ငြာတွေ ရိုက်ကူးဖို့အတွက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီ။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၁၃ရက်နေ့က Rainmakers ဘက်ကနေ ရုရှားမော်ဒယ် Youtuber နဲ့အတူ စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါပြီးဆိုပြီးတရားဝင်ကြေငြာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Dasha Taran ကို Lotte Department Store ရဲ့ မျက်မှန် brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Vieu ရဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် ကိုရီးယား campaign တွေမှာ မော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရုပ်မလေးလို ငယ်ရွယ်ပြီး လှပတာကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးကြားမှာ သဲသဲလှုပ်လှုပ် ဝန်းရံခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ Instagram အကောင့်ကို သိချင်ရင်တော့
ကိုရီးယားပရိတ်သတ်တွေရဲ့ မကျေနပ်မှုကြောင့် ဂျပန်ပရိတ်သတ်တွေနှင့် တွေ့ဆုံပွဲမှာ ကဏ္ဍတစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ရတဲ့ Jinyoung
အမြိုးသားထုကွီးရဲ့ သဲသဲလှုပျဝနျးရံခွငျးကို ခံရတဲ့ အသကျ ၁၉နှစျအရှယျ ရုရှားသူလေး
အပွစျပွောရကျစရာမရှိအောငျ ခြောမောတဲ့ အလှတရားကို ပိုငျဆိုငျထားလို့ အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အောငျမွငျလာတဲ့ သူကတော့ ရုရှားသူ YouTuber လေး Dasha Taran ပဲဖွစျပါတယျ။
အသကျအရှယျက ၁၉နှစျသာရှိသေးပမေဲ့ သူမရဲ့ အလှတရားကွောငျ့ Instagram မှာfollower ၁သနျးခှဲကြောျရှိပွီး အောငျမွငျလာတဲ့ ကွယျပှငျ့တစျပှငျ့ဖွစျခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူမဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ” The Most Beautiful Faces of 2018 ” စာရငျးမှာ ရှေးခယြျခံခဲ့ရတဲ့ အလှပဂေးတှထေဲက တစျယောကျလညျးဖွစျပါတယျ။
အခုဆိုရငျ ကိုရီးယားအဂေငြျစီဖွစျတဲ့ Rainmakers နဲ့အတူ ကွောျငွာတှေ ရိုကျကူးဖို့အတှကျ စာခြုပျခြုပျဆိုလိုကျပါပွီ။ အဲ့ဒီအကွောငျးကိုတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ မလေ ၁၃ရကျနေ့က Rainmakers ဘကျကနေ ရုရှားမောျဒယျ Youtuber နဲ့အတူ စာခြုပျခြုပျဆိုလိုကျပါပွီးဆိုပွီးတရားဝငျကွငွောခဲ့တာဖွစျပါတယျ။
Dasha Taran ကို Lotte Department Store ရဲ့ မကြျမှနျ brand တစျခုဖွစျတဲ့ Vieu ရဲ့ မောျဒယျတစျဦးအဖွစျ ကိုရီးယား campaign တှမှော မောျဒယျတစျဦးအဖွစျ တာဝနျယူဆောငျရှကျပေးရမှာဖွစျပါတယျ။
အရုပျမလေးလို ငယျရှယျပွီး လှပတာကွောငျ့ အမြိုးသားထုကွီးကွားမှာ သဲသဲလှုပျလှုပျ ဝနျးရံခံနရေတာပဲဖွစျပါတယျ။ သူမရဲ့ Instagram အကောငျ့ကို သိခငြျရငျတော့
Ivanka Trump နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ဘယ်တော့မှ တွေးမိမှာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ (၈)ချက်
သင့်အနေနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတရဲ့ သမီးအကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်အထိ အမှန်တကယ်သိထားပါသလဲ? သမ္မတသမီးတစ်ယောက်လို့ရော ဘယ်အရာနဲ့ တင်စားပြီး ခေါ်ဝေါ်မလဲ? သူမရဲ့ အဖေဟာ Donald Trump ဖြစ်ပြီး သူမအရမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ နောက်ဘက်ခြမ်းမှာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိနေမလဲ? ဒီကနေ့မှာတော့ သင်သိချင်မှ...